Izindaba - Izici eziningana ezibalulekile ezithinta ikhwalithi yamabhodlela ewayini lengilazi
Izici eziningana eziyinhloko ezithinta ikhwalithi yamabhodlela ewayini lengilazi
Yiziphi izindlela zokukhomba amabhodlela ewayini lengilazi afanelekayo? Umkhiqizi webhodlela lewayini le-Easypack uzokutshela ngezinto eziphambili ezithinta ikhwalithi yamabhodlela ewayini lengilazi: okokuqala ukukhomba ikhwalithi yangaphakathi yebhodlela lewayini lengilazi, kunjalo, ukuhlolwa kokubandayo nokuhlolwa kwengcindezi kwangaphakathi kuyadingeka. Linda uchungechunge lwezivivinyo. Lapho sithola ibhodlela lewayini lengilazi elibushelelezi nelikhanyayo, elinomehluko wombala, akukho ntambo ebolile noma ukuvulwa kokuthosa, futhi ngezansi kwebhodlela kufana ngokufana futhi azikho amaphutha asobala, kungabalwa njengengilazi efanelekayo ibhodlela lewayini. Uma ubheka ibhodlela lewayini lengilazi ekukhanyeni okukhanyayo, kunamabhamuza amancane aminyene emzimbeni webhodlela. Umphumela oqondile walesi simo ukuthi ingcindezi yangaphakathi yebhodlela lewayini lengilazi alanele, okubangelwa kakhulu ukushisa okunganele kwedamu lokuncibilika nokuncibilika okunganele kuketshezi lwengilazi. Yebo, inkinga ebucayi yekhwalithi. Okwesibili: Uma ingaphezulu lesikhunta lifakwe i-oxidized ngemuva kwesikhathi eside sokusetshenziswa okungasetshenziswanga noma okuqhubekayo kubangela ukungcola okuthile ukunamathela ebusweni besikhunta, ibhodlela lewayini lengilazi eliholelekayo lizobe lingalingani kancane. Yize kungathinti ikhwalithi empeleni, kuthinta kakhulu ukubukeka.
Amabhodlela engilazi namakani asetshenziswa kabanzi, kanti amabhodlela engilazi namakani kufanele abe nokusebenza okuthile futhi ahlangabezane namazinga athile ekhwalithi. Okulandelayo isingeniso esifushane kubakhiqizi bezicelo, ngethemba lokusiza iningi labakhiqizi bokuthenga:
①Ikhwalithi yengilazi: emsulwa futhi efanayo, ngaphandle kokukhubazeka okufana nesihlabathi, imicu, namabhamuza. Ingilazi engenambala inokucaca okuphezulu; umbala wengilazi enemibala ufana futhi uzinzile, futhi ungadonsa amandla okukhanya wobude obuthile.
②Izakhiwo zomzimba nezamakhemikhali: Inokuqina okuthile kwamakhemikhali futhi ayihlangani nokuqukethwe. It has a ngezinga elithile ukushaqeka ukumelana namandla mechanical. Ingamelana nezinqubo zokushisa nokupholisa njengokugeza nokuvala inzalo, kanye nokumelana nokugcwaliswa, ukugcinwa kanye nokuhamba. Ingahlala ingalimazi lapho ihlangabezana nengcindezi ejwayelekile yangaphakathi nangaphandle, ukudlidlizela, nomthelela.
③Ukwenza ikhwalithi: gcina amandla athile, isisindo nokuma, ukujiya kodonga okufanayo, umlomo obushelelezi nophansi ukuqinisekisa ukugcwaliswa okulula nokufakwa uphawu okuhle. Azikho izinkinga ezifana nokuphazamiseka, indawo engalingani, ukungalingani kanye nemifantu.
Abakhiqizi bamabhodlela engilazi bangenza ikakhulukazi kufaka phakathi ukulungiselela i-batch, ukuncibilika, ukwakha, ukunama, ukwelashwa kwendawo nokucubungula, ukuhlolwa nokupakisha.
①Ukulungiselela iqoqo: kufaka phakathi isitoreji, ukukala, ukuxuba nokudlulisa izinto ze-batch. Izinto zokwenziwa kweqoqo kudingeka ukuthi zixutshwe ngendlela efanayo futhi zibe nokwakheka okuzinzile kwamakhemikhali.
②Ukuncibilika: Ukuncibilika kwengilazi yamabhodlela kwenziwa ikakhulukazi ekusebenzeni okuqhubekayo kwesithando somlilo (bheka ingilazi incibilikisa isithando somlilo). Okukhishwa nsuku zonke kwamathanga evutha amalangabi amalangabi ngokuvamile kudlula ama-200t, kanti amakhulu afinyelela ku-400 ～ 500t. Okukhishwa nsuku zonke kwethonsi yethangabi elime njengehhashi ikakhulukazi kungaphansi kwama-200t. Izinga lokushisa lokuncibilika kwengilazi lifinyelela ku-1580 ～ 1600 ℃. Ukusetshenziswa kwamandla kokuncibilika kwenza cishe i-70% yamandla asetshenzisiwe esewonke ekukhiqizeni. Ingonga kahle amandla ngokuvikela ngokuqinile ithangi, ikhuphule umthamo wezitini zokuhlola ku-regenerator, ithuthukise ukwabiwa kwezinqwaba, inyuse ukusebenza kahle komlilo nokulawula ukuhanjiswa kuketshezi lwengilazi. Ukugquma ethangini lokuncibilika kungathuthukisa ukuhanjiswa kuketshezi lwengilazi, kuqinise inqubo yokucacisa kanye ne-homogenization, futhi kwandise umphumela. Ukusetshenziswa kokushisa kagesi emlilweni welangabi kungakhuphula okukhiphayo futhi kuthuthukise ikhwalithi ngaphandle kokwandisa isithando somlilo.
Isikhathi Iposi: Oct-09-2020
Sula Amabhodlela e-Glass Pump, Ingilazi Pump Amabhodlela Shampoo, Glass Bottle Nge Spray Pump, Amabhodlela e-Glass Pump Amafutha Abalulekile, Glass Bottle Nge Pump Idivaysi ekhipha, Amabhodlela e-Glass Lotion Nge Pump,